Izityalo | May 2022
Ungamisa njani iiTulips Drooping - iiTulip kwiVase, iTulip Flower
Gcina ii-tulips zakho kwi-vase ziphila ixesha elide ngezi ngcebiso zononophelo. Fumanisa ukuba ungayimisa njani intyatyambo ye-tulip ekujingiseni nasekuguqulweni kwaye wandise ubomi bayo.
Izityalo ezi-7 eziNceda ukunciphisa uxinzelelo
Ukusuka kwi-chrysanthemums ukuya kwi-lavender, iingcali zezolimo eBillyOh zityhile izityalo ezichanekileyo ezinokuthi zincede ekunciphiseni iimpawu zoxinzelelo.
Izityalo ezi-8 eziBalaseleyo zokuHanjiswa kweBasket - Iintyatyambo zebhasikidi ezijingayo
I-Fuchsias, i-verbena, i-petunias kunye neetamatato ziphakathi kwezona zityalo zilungele ukuxhoma umnyango wakho wangaphambili okanye igadi, ukubonelela ngombala kwangoko kunye nomboniso ohlala ixesha elide.
ICactus - Izinto ezili-13 zokwazi malunga nezityalo zeCactus (Cacti)
I-Cactus: Fumana iintlobo zezityalo ze-cactus ezikhoyo njengezityalo zendlu, ezona ntyatyambo zintle ze-cactus kunye nendlela yokujonga i-cactus, kubandakanya ne-prickly ones.
Izityalo ezi-7 zeNdlu zokuGcina izinambuzane ngaphandle kweKhaya lakho -Ukuzihambisa njani iimpukane
Esikhundleni sokufikelela kwi-fly spray okanye i-repellent repellent, faka ezi zityalo kwikhaya lakho ngendlela enobungakanani bokubamba i-pest.
Iibhasikiti ezijingayo: yongeza umbala kwigadi yakho, iingcebiso ezivela kuDavid Domoney
Kutheni iibhasikiti ezixhonyiweyo ziyakuhombisa igadi yakho, kunye neengcebiso eziphezulu ezivela kwigadi yeTV uDavid Domoney, kunye neengcebiso ezingaphezulu.
Iletisi kunye neminqathe ziphakathi kwemifuno ekhula ngokukhawuleza onokuyikhulisa ekhaya. Fumana 7 imifuno elula kwaye ekhawulezayo yokukhula kunye nembewu yokuhlwayela ngoku.
Izityalo zekwindla-7 izityalo zekwindla ezikhulayo kwigadi yakho
Nazi ezona ntyatyambo zintlakohlaza zigqamileyo ngombala kwigadi yakho ekwindla nasebusika. Ezi zezona zityalo zingcono zentwasahlobo onokuzithenga.
Izityalo zomoya ziKhetho eziPhezulu zokuTyalela izindlu, i-Waitrose yeGadi ityhila
Ulondolozo olusezantsi, izityalo zomoya ezi-quirky, ngokukodwa ezijingayo i-jellyfish- ezikhula ngaphandle kwesidingo somhlaba- zingqina ukuba sisityalo sokukhetha indlu, ngokweedatha ezintsha zentengiso ezivela kwi-Waitrose.
Iintyatyambo ezi-6 eziNhle zokuDala isiQhina sobuhlobo bokugqibela
Yenza isipha seentyatyambo esihle kubahlobo bakho, esigqibeleleyo kwisipho ngoSuku lwaBantu oluBalaseleyo kuZwelonke (ngoMgqibelo umhla wesi-8 kuJuni 2019). Yeyiphi indlela ebhetele yokubonisa umntu omkhathaleleyo kunokuba uneqela leentyatyambo ezikhethwe ngesandla.
Izityalo zegumbi lokuhlambela-10 ezona zityalo ziBalaseleyo kwigumbi lokuhlambela
Amagumbi okuhlambela alungile kwizityalo ukuze zikhule kakuhle, ngenxa yomoya ofumileyo. Jonga ezona zityalo zintle zokuhlambela, kubandakanya nezityalo ezixhonywa kwindawo yokuhlambela.
Ikhaya lasekhaya lithengisa i-Eco Friendly Roll-Out Board Boarder
Ikhaya lasekhaya lisungula umda wegadi entsha enobuhlobo kwindalo ukunceda abagadi begadi abaqala ukutyala batyatyambe ngamanyathelo amathandathu alula.
Izityalo ezinetyhefu: Izityalo ezili-10 eziqhelekileyo zeNdlu eziyityhefu kwiikati, izinja, abantu
Ezinye izinto zendlu zinokuba yityhefu kwaye zinetyhefu kwizilwanyana zasekhaya nakubantwana abancinci bengazi. Jonga izitya zendlu ezili-10 ezinokuba yityhefu xa utyisiwe.
Isityalo se-Banana-Ukuthenga, ukukhula kunye nokukhathalela isityalo se-Banana Leaf
Eyaziwa ngesiqhamo sayo esimnandi, isityalo sebhanana sisityalo esifanelekileyo sokuzisa umnxeba kwitropiki ekhayeni lakho. Ukuba ufuna isityalo sebhanana sangaphakathi, landela ezi ngcebiso.
7 Ababulali Bokhula Abazenzeleyo Abenza Amakhemikhali Kwigadi Yakho
Abantu ababulala ukhula basekhaya ngaphandle kwemichiza kulula ukuzisebenzisa kwaye banokufumaneka rhoqo ekhaya. Khusela igadi yakho kule ntwasahlobo kunye nababulali bokhula abangawenziyo ngaphandle kwemichiza abalungele indalo.
IMagnolia-Ukukhetha kunye nokutyala umthi weMagnolia kwigadi yakho
IMagnolia ngokuqhakaza ngokupheleleyo yenye yozuko lwentwasahlobo, nokuba kungumthi ovuthiweyo oneentyatyambo ezinkulu ezimile okwekomityi okanye i-compact shrub eqatywe ziinkwenkwezi.
Lumkela uQalo oluNgenelelayo lokuThabatha iiGadi, iingcali zilumkisa
Lumka ngoqalo olungenelelayo oluthatha iigadi zaseBritane. Ukubaleka kwe-bamboo kungasasazeka ukuya kuthi ga kwi-30ft phantsi komhlaba.
Izityalo eziyi-9 ezinetyhefu ezinokuba segadini yakho
Abacebisi begadi bayabongozwa ukuba bahlale bevule izityalo ezinetyhefu eziqhelekileyo kwizitiya ezininzi zase-UK, kuba ezi zityalo zinokubangela ingozi ebantwini, ezinjeni nasezikati.
Ukukhulisa iitumato: Ungayikhulisa njani iitumato (Iimbiza, iGreenhouse, iGreen Bag)
Ukuba awuzange ukhule i-veg ngaphambili, iitumato ezikhulayo yindawo elungileyo ukuqala. Nantsi indlela yokutyala iitumato, kubandakanya nokukhulisa iitumato kwiimbiza kunye negreenhouse.
13 Amanqaku eGeranium amancinci - iPelargonium
Fumanisa umahluko phakathi kweGeranium kunye nePelargonium ngezi nyani zincinci zaziwayo malunga nesityalo esimibalabala, esisezantsi segeranium.
ioyile vs ipeyinti esekwe emanzini
I-cypress ye-canopy yokutyelela iindwendwe
bopha idayi imaski diy
imibala yepeyinti kwigumbi lokulala eyi-2020
Ukutyala ii-susans zamehlo amnyama